Weeraryahan Wayne Mark Rooney iyo Leo Messi oo si wada jir ah u cambaareeyey Ficilkii Pepe(Daawo Muuqaal+Warbixin) - iftineducation.com
iftineducation.com – Waxaa Waji cusub yeeshay oo buuq fara badan dhaliyey Kiiskii dhex maray Pepe Vs Leo Messi kulankii Koobka dalka Spain Real Madrid Vs Fc Barcelona (1-2).
Difaaca kooxda Real Madrid Pepe ayaa xili Faol laga dhigay Daqiiqadii 67-aad intii ay Ciyaarta socotay ayaa waxa uu si ula kac ah Gacanta ama faraha uga istaagay Leo Messi oo xiligaas dhulka fadhiyey.
Alabiitara Ciyaartaan garsoorayey wuxuu markii ugu horeeysay shaaca ka qaaday inuusan haba yaraatee Qiyaanada Pepe arkin hadii uu arki lahaa Ficilkaas naxariis darada ahna uu horay ka siin lahaa Rooso.
Kiiskaan waxaa Waji cusub u yeelay Ciyaaryahan leo Messi oo u waramayey Tv-ga Skysport qeeybtiisa dalka Spain wuxuuna Messi yiri sidan ” ma ahan markii ugu horeeysay oo uu Pepe Ficilkaas qaabka daran ku dhaqaaqa balse Ciyaar kasta wuu i aflagaadeeyn jiray waxaana aniga hubaa Pepe inuu ku shaqeenayo Fikrad kale oo oo Maskaxda looga soo rakibay,,
Hadalka Leo Messi ayaa durbadiiba Saxaafada wexeey u Fasiratay inuu kala Jeeday Pepe oo ay soo dir direen Macalin jose Morinho iyo ciyaaryahan Cristiano Ronaldo oo dhamaantood ka soo wada jeeda dalka Portugal.
Qarshada Qadka dhexe ee kooxda Fc Barcelona Xavi Hernandez isaga oo is qarin waayey waxa uu dhamaan dhibkii dhacay dusha uga tuuray markiisii 3-aad oo xiriir ah Macalin jose Morinho.
” Aniga horay ayaan u sheegay in Kubada Spain ay qas ku sii jiri doonto inta Morinho uu Tababaraha ka yahay mid ka mid ah kooxaha ugu waa weeyn dalka Spain ayuu yiri Xavi Hernandez oo daba dhigtay Macalin Jose Morinho.
Dhanka kale Weeraryahanka Qaranka England iyo kooxda Manchester United Wayne Mark Rooney wuxuu difaacay Ciyaaryahan Leo Messi wuxuuna Ciyaaryahan Qac ah oo in la iska qabto ku haboon ku tilmaamay Difaaca kooxda Real Madrid iyo Qaranka Portugal ay ku dhaartaan ee asal ahaan ka soo jeedo dalka Brazil waa Kepler Laveran Lima Ferreira Pepe.
Weeraryahan Wayne Mark Rooney oo hadalkiisa sii wata waxa uu yiri ” Mararka qaar dadka nuucaan ah waxa ay sameenayaan hadaad aragto yaab ayaa ku dilaya,, . Caalamka waxa uu si weeyn ula yaabay Rooney oo qudhiisa ahaa Xiddigaha loo yaqaan Quuqlayaasha oo hadane ka xumaaday Ficilka uu ku kacay Ciyaaryahan Pepe !!!!